HTML: Sida loo sameeyo Liiska Qoraalka – Casharka 5aad - AqoonKaal.com
Casharkan waxaan ku baran doonaa sida loo qoro xeerarka HTML ee suurtagalka ka dhiga in qoraallada loo sameeyo liis taxan. Liiska oo noqon kara mid wata tiro taxan,a ma liis aan tiro lahayn.
Sida aan Video-ga ku arki doono, xeerarka liiska sameeya waa kuwo aad u sahlan, laakiin aad loo adeegsado. Waa xeerar ka qayb qaata bilicda hannaanka qoraallada.
Video-ga casharkan hoos ka daawo:
walaal aad baad u mahadsantahay sida wanaagsan aad u sharaxeeso casharada waana la dhacay run ahaantii waxan ahay arday cusub shalay bana bilaabay waxan xiiseenayaa HTML-ka waxaana ku jiraa wali cahsarada HTML
laylis-kan inaa saxay iyo inkale
Si loo sameeyo Website waxa loo baahanyahay:
In la iibsado Domain -Magaca webka
Markaas waa in Host ama Martigaliye la xusho:
Mgga webka – Disk space
Baaxadda xogta -Bandwidth
Inta email laga sameysan karo
Markaas waa in webka lagu dhiso
CSS oo ah naqshadeynta
In a adeegsan karo Wwordpress
Markaas xoogtii lagu xawilo Serverka-FTP
Suuq geyn in loo sameeyo si loo barto
1.In la iibsado Domain -Magaca webka
2.Markaas waa in Host ama Martigaliye la xusho: ◦Mgga webka – Disk space
◦Baaxadda xogta -Bandwidth
◦Inta email laga sameysan karo
3.Markaas waa in webka lagu dhiso ◦Xeerka HTML,sida: 1.HTML5 iyo
2.CSS oo ah naqshadeynta
◦In a adeegsan karo Wwordpress
4.Markaas xoogtii lagu xawilo Serverka-FTP
5.Suuq geyn in loo sameeyo si loo barto
Walaal meel fiican ayaad marinaysaaa ii siiwad dadaalka, insha Allah waad guulaysanaysaa
Farxaam jaamac says:
Wlaal waadmahd santahay dadaal waayo waad iqancisay sidaad casharka usharaxaysid
asc waad mahadsantay sida wanaagsan oo aad noogu sharxayso wallaahi waan ku taami jiray inaan helno sharax af somali ah sidaan oo kale aqoonta allaha idiin kordhiyo waxaan idin ka codsanayaa inaad aad usharaxdaan wordpress websit-kayga ayaa ku dhisan